Xaaladda Magaalada Galkacyo ee Gobolka Mudug, oo degan, – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaXaaladda Magaalada Galkacyo ee Gobolka Mudug, oo degan,
Xaalada magaalada Galkacyo ee Gobolka Mudug ayaa saaka degan kadib markii shalay Magaalada uu dagaal Xooggan dhaxmaray Ciidamada Maamulada Galmudug iyo Puntlnad,
Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Galmudug ayaa midba midka kale waxaa uu ku eedeynayaa inuu dagaalka mas’uul ka ahaa.
War saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalka ay ka dambeeyeen maleeshiyo ka tirsan Galmudug oo weerar ku soo qaaday howl wadeeno ku sugneyd Xaafada Garsoor.
Puntland ayaa ku eedeysay Galmudug in weerarka ay u adeegsatay madaafiic hoobiyeyaal ah iyo qoryaha lidka diyaaradaha, taasoo ay ku waxyeeloobeen dad maato ah.
Waxaa soo baxaya baaqyo nabadeed oo loo jeedinayo labada dhinac, waxaana waxgaradka deegaanada Puntland iyo Galmudug ay ku baaqeen in dagaalka la joojiyo.
Dowladda Federaalka ayaa dhankeeda ugu baaqday labada maamul inay dagaalka joojiyaan, isla markaana xasilooni u horseedaan dadka deegaanka.
Dagaalkii shalay ayaa waxaa ku geeriyootay ku dhowaad todobo ruux, halka dad gaaraya afartan ruuxna ku dhaawacmeen, kuwaasoo u badnaa dad rayid ah.
Libaax Afar Ruux ku dhawacay deeganka Ceel dheer ee Gobolka Hiiraan,